Ny maha-zava-dehibe ny votoaty amin'ny SEO: Torolàlana amin'ny antsipirihany nataon'i Semalt
Fahazoana mombamomba azy
Ahoana ny fomba hamoronana votoaty ifantohana ho an'ny milina fikarohana
Ny andraikitr'i Semalt
Tranonkala maro no maniry ho voatanisa eo amin'ireo tranonkala Google 100 100. Ny maro amin'ireo tranonkala ireo dia manandrana manatsara ny tranokalany ho an'ny milina fikarohana. Betsaka kokoa amin'izy ireo no tena mahatakatra ny maha-zava-dehibe ny votoaty amin'ny SEO.
Raha resaka momba ny laharana amin'ny tampon'ny fikarohana, ny votoatin'ny tranonkalanao dia azo ampitovina amin'ny masin'ilay fiara. Ny fiara ataonao tsy hivezivezy tsy misy motera, toy izany koa ny tranonkalanao tsy hiroso amin'ny laharana tsy misy atiny mendrika.
Raha ny kalitao ambony dia kalitao ary ny paikady SEO hafa dia topnotch, tsy misy fotoana, ny tranonkalanao dia eo an-tampon'ny filokana fikarohana. Ny mifamadika amin'izany dia raha mahantra ny votoatinao sy ny paikady SEO - mety hitarika sazy avy amin'ny Google izy ireo. Raha vao voasazy ny sain'ny Google ny tranokala dia mazàna dia sarotra aminy ny miverina amin'izany.
Ny tanjon'i Semalt dia hanampy anao hahatakatra ny lanjan'ny votoaty ao amin'ny SEO, ny tena atiny, ny fomba hamoronana votoaty azo antoka sy izay azonao atao mba hahazoana antoka fa miasa tsara ny votoatinao sy ny tetikady SEO hanome anao toerana eo an-tampon'ny fikarohana. fangatahana maotera.
Andao hijery ny tontolon'ny votoatiny sy ny SEO.
Amin'ny ambaratonga fototra, ny votoaty dia fampahalalana nomerika fotsiny (lahatsoratra, sary, video, audio) ao amin'ny tranonkalanao mikendry ny hanome fanazavana, hampialazam-peo na hampahafantatra ireo mpitsidika anao.
Manao ahoana ny maha-zava-dehibe ny votoaty amin'ny SEO?
Ny valin'ny fikarohana ao amin'ny 3,5 miliara dia apetraka isan'andro amin'ny Google. Ao anatin'ny ezaka hitahirizana ny mpampiasa azy dia tsy mitsahatra manavao ny algorithm ny Google mba hahazoana antoka fa manome "valiny mahasoa sy ilaina" ao anatin'ny fotoana fohy indrindra.
Ny vokatra mahasoa sy ilaina amin'ity tranga ity dia ny votoatin'ny tranonkala manerana ny Internet. Avy eo izy ireo dia voasokajy ho amin'ny fampiasana sy ilaina amin'ny mpampiasa manao ny fikarohana.
Mampiseho izany fa ny votoatinao dia tokony hoheverin'ny Google ho mpampiasa iray alohan'ny hanaovana izany.
Mba hampitomboana ny mety ho lanjan'ny SEO votoatinao dia misy ny toetrany sasany izay hananana ny votoatinao. Anisan'izy ireo:
1. Tokony ho ilaina sy fampahalalana izany: raha manana tranokala iray ho an'ny orinasanao ianao dia tokony hampiditra ny toerana, ny mombamomba ny fifandraisana, ny vokatra / serivisy atolotra, ary ny ora fiasana. Raha azonao atao dia manisy bilaogy hampahafantarana ny mpanjifanao vaovao farany momba ny orinasanao.
2. Tokony hanan-danja sy mahasoa kokoa noho ny tranokala hafa ao anatin'io faritra io ihany: Raha manoratra momba ny fanampiana manokana, ohatra, dia ataovy azo antoka fa manolotra fampahalalana tsaratsara kokoa na fijery hafa momba ny fanampiana manokana ny lahatsoratrao noho ny an'alinalina lahatsoratra nivoaka isan'andro isan'andro mikasika an'io lohahevitra io ihany.
3. Tokony ho azo itokisana: Ny maha-azo itokisana ny tranonkalanao dia azo hatsaraina raha mampiasa fikarohana, citation ary rohy ho an'ny atin'ny tranokalanao. Ny biografia mpanoratra, ny famoahana hevitra ary ny fijoroana ho vavolombelona avy amin'ireo mpanjifa tena misy dia hanatsara ny fahatokisana anao ihany koa.
4. Tokony ho kalitao tsara izy io: Hamarino fa tsy manam-paharoa ny atiny ao amin'ny tranokalanao, mahitsy hatrany amin'ny teboka sy ny kalitao topnotch. Mialà amin'ny lozabe rehetra na dia kely fotsiny aza.
5. Tokony ho mahaliana: Ento miakatra ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny fampitomboana sary sy horonan-tsarimihetsika kalitao. Aza misalasala ny mpitsidika anao amin'ny alàlan'ny hadisoana tsipelina na stylistic na zava-misy. Halaviro koa ny doka be loatra. Tazomy hatrany ireo mpitsidika anao amin'ny alàlan'ny fanavaozana azy ireo tsy tapaka. Azonao atao koa ny mitazona azy ireo amin'ny tranokalanao mandritra ny fotoana lava kokoa amin'ny alàlan'ny boaty fanehoan-kevitra sy / na haino aman-jery sosialy.
Ahoana ny fomba hamoronana votoaty izay azo ampiharina ho an'ny milina fikarohana
Mba hamoronana votoaty optimista, misy vitsivitsy ireo fomba tsy maintsy arahina.
Alohan'ny hamoronana ny votoatiny
1. Manaova fikarohana teny miavaka: Ho an'ny vokatra tsara indrindra, dia ho tianao ny hahita izay tena tadiavin'ny mpihaino tadiavinao. Ny fitaovana fikarohana fikarohana momba ny teny azo itokisana be dia be toa izay omen'ny Semalt dia tena hahazo tombony betsaka amin'ny fanatanterahana izany.
2. Safidio ny lohahevitrao sy ny teny fanalahidy manohana azy: zava-dehibe ny manao fikarohana amin'ny teny voalohany, mba hahitana ny voka-dratsinao. Avy amin'ny fikarohana nataonao dia fantaro lohahevitra iray sahaza ny atiny. Hamarino fa mifantoka amin'ny teny fanalahidy lava ianao. Aza atao koa ny hisorohana ny teny fanalahidy be dia be miaraka amin'ny karoka marobe.
3. Mampifanaraka ny lisitry ny drafitra sy ny votoatinao ho mora vakiana: tranonkala maro no miady mba hisarihana ny mpitsidika rehetra izay anananao ao amin'ny tranonkalanao. Noho izany dia tsy maintsy manao izay tratry ny herinao ianao mba hampiharana azy ireo ho afa-po amin'ny atiny. Fomba iray anaovana izany dia ny fanodinana ny votoatinao ho mora vakiana.
Ireto misy torohevitra vitsivitsy mety hanampy anao:
a . Ravao ny votoatinao amin'ny sombintsombiny kely. Fehintsoratra lehibe no mampatahotra mpitsidika marobe. Tsara raha mampiasa fehezanteny 2-3 eo isaky ny andalana.
b . Raha be araka izay azo atao dia ampidiro ny lohatenikely sy / na sary aorian'ny teny 200-300 mba hihoatra kokoa ny votoatinao.
4. Ampidiro ny backlink ao amin'ny atiny: Arakaraka ny itokisan'ny tranokalanao dia ny haavon'ny avo kokoa. Rehefa mampifandray ireo teny vitsivitsy amin'ny tranokala misy sy manan-kery ianao, dia heverin'ny milina fikarohana fa azo itokisana ny mombamomba anao. Ho an'ny valiny tsara indrindra dia apetraho ao anaty rohy na 6 na latsaka ny teny ao amin'ny rohy anao.
5. Mifikira amin'ny lohahevitra tianao sy ny kendrenao kendrena: Raha te hamorona ny votoatiny tena ilaina sy ilaina amin'ny lohahevitra ianao, dia tena ilaina ny mifikitra amin'ny lohahevitrao. Aza manandrana mikendry teny fanalahidy be dia be. Hamarino fa mifantoka amin'ny lohahevitrao sy ireo teny fanalahidy izay manohana azy ianao.
Aorian'ny famoronana ny votoatinao
1. Amporisiho ny URL anao: Adiresin'ny pejin-tranonkalanao napetraka mivantana eo an-tampon'ny valin'ny fikarohana. Ny fomba ahafahana mandrafitra ny URL anao dia afaka mamaritra ny tahan'ny alàlan'ny klik-through anao. Raha lava loatra ny URL anao na toa tsy mifono mistery, mety hampatahotra ireo mpampiasa fikarohana izy ireo raha tsy hitohy eo amin'ny tranokalanao. Zava-dehibe ny vakinao azonao vakiana satria misy fiantraikany amin'ny alàlan'ny fiantsoana amin'ny alàlan'ny fiantsoana mivantana amin'ny alàlan'ny laharam-pitanao.
2. Amporisiho ny lohateninao amin'ny lohateninao: Ny lohatenin'ny lohateny dia lohateny azo tsindrio azo jerena mivantana eto ambany URL. Ny kalitaon'ny takelaka lohateninao dia mety mahatonga ny mpampiasa hanika anao hisintona ny tranokalanao na tsy hijery azy io. Ireo marika lohateny ihany koa dia manampy ireo milina fikarohana hahalala ny momba ny tranokalanao.
Ireto misy torohevitra vitsivitsy afaka manampy anao hahomby amin'ny lohateninao:
a. Avelao hametaka mivantana ny marika lohateny hoe inona ny atin'ny pejy.
b. Ny fanondroana anaram-boninahitra dia tokony ho 60 litera na latsaka.
c. Apetraho eo am-piandohana ny teny fanalahidy kendrenao.
e. Manandrama tsy mampiditra teny fanalahidy maro ao anaty lohateny.
3. Amporisiho ny famaritana ny mombamomba anao: Ny famaritana meta dia snippet fohy amin'ny lahatsoratra avy amin'ny pejinao izay miseho eo ambanin'ny URL sy ny lohatenin'ny lohateny. Ny votoatiny kely hita ao amin'ny filazalazana meta anao dia misy fiantraikany amin'ny alàlan'ny paompy-kaontinao koa satria izay ho hitan'ireo mpampiasa azy no hamaritra raha hitohy amin'ny tranokalanao izy ireo na manambina ny fitetezana horonana. Ireto misy torohevitra vitsivitsy hanampy anao hahomby amin'ny famaritana ny meta-nao:
a. Hamarino fa famaritana mivaona fohy sy manokana momba ny atiny lehibe ny famaritana ny mombamomba.
b. Hamarino fa misy ny tarehin-tsoratra maherin'ny 160 ny famaritana meta.
c. Apetraho ao amin'ny famaritana meta ny teny fanalahidy mifandraika (hasongadina amin'ny valin'ny fikarohana) izy ireo.
Ahoana ny fanampiana an'i Semalt
Mety ho malefaka teknika avokoa izany ary mety ho toa asa be. Izany no antony nanaovan'i Semalt drafitra fampiroboroboana automated ho an'ny orinasanao. Ny tena fototry ny famoronana votoaty lehibe amin'ny voalohany dia ny fanatsarana ny laharam-pahamehana ao amin'ny milina fikarohana izay, raha ny marina, dia hitarika fahombiazana ho an'ny orinasanao.
Manala ny adin-tsaina aminao i Semalt ary mahomby ny orinasanao amin'ny Internet.
Manolotra vokatra sy serivisy mahavariana izy ireo mba hiantohana ny haben'ny pejinao. Anisan'izany:
1. AutoSEO: Ny AutoSEO an'ny Semalt dia mampanantena valiny lehibe ao anatin'ny fotoana fohy. Ity fonosana SEO ity dia manolotra: fanatsarana ny fahitana tranokala; amin'ny fanamafisana pejy; tranobe fifandraisana; fikarohana keyword ary ny tatitra an-tserasera momba ny analytics. Tsindrio eto raha hanomboka.
2. Full SEO: Izy io dia ahitana teknika SEO efa mandroso natao ho valiny tsara kokoa. Ny SEO feno an'ny Semalt dia manolotra: ny fitrandrahana anatiny; fanamorana ny tranokala; fanoratana votoaty; rohy mahazo; fanohanana sy consulting. Araraoty eto amin'ny SEO feno ny Semalt eto .
3. analytics Web: Ny fitaovam-pikarohana momba ny tranonkala Semalt dia manambara ny fomba faran'izay fohy indrindra amin'ny Google TOP10. Ireo fitaovana ireo dia manampy amin'ny fizahana ny fizaran'ny tranonkalanao; mamelana ny fahitana ny tranokalanao amin'ny Internet; mandinika tranonkala mifaninana; fantaro ireo lesoka momba ny fanamafisana ao amin'ny pejy; ary mandefa tatitra momba ny habaka amin'ny Internet. Azonao atao ny mandray ny tatitra momba ny analystanta maimaimpoana maimaim-poana .
4. Fivoarana an-tranonkala: resaka an-tserasera ihany koa ny fahatsapana voalohany na amin'ny toe-javatra iainana. Ny sary manintona dia manampy ny mpanjifa bebe kokoa. Semalt miantoka ny tranokalanao dia manintona sy tsara ho an'ny mpanjifanao. Ny mpamorona tranonkala matihanina an'i Semalt dia manome: endrika an-tranonkala mahasarika sy ilaina; vahaolana vahaolana momba ny fitantanana votoaty; nitombo fahitana; fampidirana plugin malefaka sy API; Manatanjaka ny e-varotra; fanohanana sy fikojakojana.
5. Famokarana horonantsary: Asides mametraka votoaty an-tsoratra topnotch amin'ny mpanjifany, Semalt ihany koa dia manome votoaty lahatsary mahavariana mba hitazomana anao lavitra mialoha ny fifaninanana.
Ny votoatiny dia mpanjaka amin'ny fisavana fikarohana. Ny votoatinao dia afaka manao ny orinasanao na manapaka azy. Miaraka amin'ny fahatsapana voangona eto dia afaka mamorona votoaty mahomby ianao na tsara kokoa, avelao eo am-pelatanan'ny tsara indrindra amin'ny raharaham-barotra SEO - Semalt.